Mvura kefir | Kudya kweNutri
Paul Heidemeyer | | Zvokudya, Nutrition
Kefir chikafu chine hutano asi panguva imwe chete zvinonetsa kuwana kuti uite mvura kefir kana mukaka, iwo marudzi maviri ekefir aripo.
Kefir ine maitiro eprobiotic Inonakidza kwazvo kune iyo muviri, inoda kujekesa kwehunyanzvi uye kuteedzera mamwe marongero ekuti uwane mvura kefir.
Mvura kefir, semukaka kefir, ine microflora imwechete. Muchiitiko ichi, mvura kefir iri nyore kugadzira sezvo iwe usingade mukaka wakasvibirira kuti uite.
1 Mvura kefir
2 Nzira yekuita sei mvura kefir
2.1 Zvishandiso zvekuigadzirira
2.2 Zvisungo zvinodiwa
2.3 Kugadzirira, nhanho nhanho
3 Zvivakwa zvemvura kefir
Kana iwe uchigara uchirwara nematambudziko ehutano hwematumbo, unogona kugadzira kefir yemvura kuti utarisire hutano hwako uye ugare wakasimba, mukuwedzera, kugadzirira kefir yemvura kumba kuri nyore, iwe unongoda kuwana iyo probiotic kukwanisa kunakirwa nemvura yakaviriswa.
Kuti uite mvura kefir, unoda zviyo zve kefir, kugadzira chinwiwa-chemvura. Zviyo izvi zvakazara probiotic, mhando yepamusoro yemabhakitiriya anogara munzvimbo imwechete. Aya mabhakitiriya anogona kutibatsira kuti tigare takagwinya uye nekudzivirira kwakasimba.
Aya maprobiotic, mabhakitiriya akanaka anowanikwa mudumbuIzvo zvakakosha pakugaya uye kuti zvinovaka muviri zvipinde muropa redu, mukuwedzera kwekutidzivirira kubva kuzvirwere.
Immune system inodzivirirwa uye inowana simba rakawanda, kana tikanzwa kushaya simba, kusagaya zvakanaka, kusvotwa kana matambudziko patinoenda kubasa, cherekedza uye dzidza kuita Mvura kefirkukuchengetedza uine hutano uye wakatsetseka. Mukuwedzera, kuchengetedza kudya kwakaringana uye kuita kurovedza muviri nguva dzose.
Nzira yekuita sei mvura kefir
Kugadzirira kwechinwa ichi yakapusa, inokurumidza uye inopa mibairo yakanaka kwazvo. Iyo inongoda chete nguva yekuzorora uye kuvirisa kwenharaunda 48 maawa.
Jagi regirazi re 1 litre.
Yehuni kana yepurasitiki scoop yekumutsa.
Mucheka wakachena, tauro, kana mafirita ekofi kuvhara karafa.
Bhandi rerabha yekubatanidza mafirita nejagi remvura.
Sefa yepurasitiki yekubvisa zviyo zvezviyo kubva mumvura.
Zviyo zve Mvura yakasviba kefir.
Hafu yekapu yeshuga tsvuku.
Kugadzirira, nhanho nhanho
Kutanga isa shuga muhari yegirazi. Wedzera hafu yekapu yemvura inopisa uye simbisa kusvikira shuga yapera zvachose. Wobva wawedzera makapu matatu emvura tembiricha yemukamuri, zviri pakati pemakumi maviri nemakumi maviri nemadhigirii.
Wedzera iyo hydrated kefir zviyo uye vhara iyo jug ne mafirita ekofi kana netauro. Iyi nhanho yakakosha sezvo kuvirisa kuchigadzira magasi uye jira rinopinza rinodiwa kuti magasi abude zvakanaka. Siya chirongo munzvimbo yakachengeteka uye chirega chigare kwemazuva maviri.
Kana ichinge yaviriswa, kamuranisa zviyo zve mvura kefir uye wobva wawedzera kune itsva yekushandira yeshuga mvura. Chinwiwa chichava chakagadzirira kudya.
Zvivakwa zvemvura kefir
Ichi chinwiwa chemvura chine zvinhu zvakakosha zvinotibatsira kuti tigare takagwinya. Tevere tinokuudza iwe kuti ndeapi mabhenefiti ayo chinwiwa ichi chinounza kwatiri, kuitira kuti iwe usarudze rimwe zuva kuti uite kumba, iwe uchaona kuti muviri wako unenge uine hutano hwakanyanya.
Inochengetedza a digestive system hutano.
Zvinoita kuti tinzwe zvakanaka.
Inobatsira kudzorera kugaya maruva.
Iyo yakafuma mune zvinovaka muviri senge nhabvu, vitamini B12, magnesium uye folic acid.
Wedzera yedu zvidziviriro.
Inochengetedza a immune system akasimba uye akagwinya.
Kefir inorwisa mabhakitiriya akaipa mumatumbu.
Inobatsira kugaya lactose. Wedzera kushivirira kwedu kune zvigadzirwa zvemukaka kana isu tisingashiviriri.
Inoderedza kurwiswa kubva asima uye allergic reaction.
Inovandudza zviratidzo zve yakatsamwa bowel syndrome.
Rwisa iyo kupukunyuka pano neapo.
Vandudza iyo Kugaya kudya.
Wedzerai hutano hwemapfupa yezviri mukati maro mu calcium.
Inoderedza chiitiko che masero kenza.
Inodzivirira kuoneka kwe Gomarara.
ari zviyo Del kefir Iwo ave achishandiswa kwemakore mazhinji kuchengetedza muviri uye muviri zvine hutano. Basa re probiotic vanotibatsira kuti tinzwe zvakanaka. Sezvawaona, kugadzirira kwechinwiwa ichi kuri nyore kwazvo, isu tinongofanirwa kutora iyo kefir zviyo uye varege vovira mumvura.
Unogona kugadzirira chinwiwa kakawanda sezvaunoda, kana iwe uchinzwa hushoma uye uine husina kugaya zvakanaka mukati memwaka, unogona kusarudza kuita ichi chinwiwa kana kudya zvigadzirwa zvakaita se yoghurt yogurt kana mukaka kefir watinogona kuwana mukati muzvitoro.
Usazeza uye tanga kunwa yakagadzirirwa kefir mvura nhasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kudya kweNutri » Nutrition » Mvura kefir
Iwo masere mabhenefiti echeri nyanya